प्रकाशित: मंगलबार, असार १, २०७८, १०:१७:०० डम्बर खतिवडा
यतिका धेरै नाटक/नौटंकी, प्रहसन, मजाक, सत्यानाश, बर्बादी र बेबकुफीपछि फेरि केही मान्छे भन्दैछन्– कम्युनिस्ट एकता। मानौं कि यो कुनै ‘महान्’ र ‘नयाँ सम्भावना’ हो। विगत ३ वर्ष बढी समयदेखि देश जुन अवधारणा र अभ्यासले आक्रान्त छ, जुन प्रयोग/परीक्षणको असफलताले राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक र मानवीय संकट सगरमाथाको चुच्चोभन्दा माथि चुलिएको छ, फेरि त्यही थोत्रो अभ्यास दोहोर्याएर देशले कुनै निकास पाउँदैन।
निःसन्देह ‘एमाले’ र ‘सूर्य’ स्थापित ब्रान्ड हुन्। तर, ब्रान्ड निष्ठा र चुनाव चिह्नले इतिहासको गति रोक्न सक्छ भन्ने अपेक्षा आफैंमा मूर्खता हो। इतिहासले दिएको ‘स्पेस’ मा ती स्थापित हुन सक्छन् तर जब इतिहाससँगै जोरी खोज्न थाल्छन्, इतिहासले तिनलाई पाहा पछारे झैं निर्ममतापूर्वक पछारिदिन्छ। एक दशकअघिसम्म भारतका कांग्रेस–कम्युनिस्टहरू ठीक यस्तै विश्वास गर्थे। आफ्नो इतिहास, ब्रान्ड नाम र ब्रान्ड चिह्नप्रति ठूलो विश्वास थियो उनीहरूमा। समयले कोल्टे फेर्दै छ भन्ने उनीहरुले बुझेनन्।
सन् २०१० पछि कांग्रेस–कम्युनिस्ट दुवैका दुर्दिन सुरु भए। मोदी–शाह नेतृत्वको भाजपा आयो। आम आदमी पार्टी आयो। तृणमूल कांग्रेस आयो। राजनीतिक करिअरको चिन्ताले ग्रस्त कांग्रेस–कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको एक पंक्ति ‘भागा रे भाग’ भयो। राजनीतिकर्मीलाई करिअरको चिन्ता नै हुँदैन भन्ने हैन, हुन्छ। तर, त्यो पहिलो हैन, दोस्रो प्राथमिकताको विषय हो। असल र इमानदार राजनीतिकर्मीका लागि पहिलो चिन्ता जहिल्यै विचार, एजेन्डा र आन्दोलनको प्रतिष्ठा, इतिहासले सुम्पेको दायित्व र राष्ट्रिय कार्यभार हुन्छ, करिअर हैन।
कम्युनिस्ट एकताको पुनः प्रयासमा कुनै वैचारिक संगति देखिन्न। देखिन्छ त त्यही राजनीतिक करिअरको चिन्ता, ठूलो पार्टीको नेता–कार्यकर्ता भइरहने, त्यसको आडमा सामाजिक प्रतिष्ठा र शक्ति प्राप्त गर्ने, चुनाव जित्ने, सत्तामा जाने, कमाउने, व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवनलाई सहज बनाउने बाहेक त्यो चिन्ताको कुनै अर्को अभीष्ट छैन। नत्र किन र केका लागि एकता? कसकसको एकता? कस्तो एकता? कुन विचार र एजेन्डाका लागि एकता?
मानौं कि एकता भयो, यो बीचका घटनाक्रमप्रतिको दृष्टिकोण के हुन्छ? ‘कम्युनिस्टहरु मिले, सबैथोक ठीकठाक भयो, सकियो’ भन्ने हुन्छ? ओलीले दुईदुई पटक गरेको निर्वाचित प्रतिनिधिसभामाथिको प्रहार के हुन्छ? ओली–विद्या कार्यकालका झुट, पाखण्ड, असंवैधानिक हर्कत, भ्रष्टाचार र अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप के हुन्छन्? सबै माफी मिनाहा हुन्छन् वा एकीकृत पार्टीले त्यसको नैतिक उत्तरदायित्व वहन गर्न लिन्छ? कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट, एकता, एकताको रटभित्र कुनै गुदी छ कि त्यो भुसको थैलो मात्र हो? तथाकथित कम्युनिस्ट एकताको अवधिमा लोकतन्त्र, संविधान, संविधानवाद, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, संवैधानिक निकायको निष्पक्षता, राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादा र दायित्वमाथि जुन हानिनोक्सानी भएको छ, त्यसको क्षतिपूरण कसले कसरी गर्छ? यस्ता प्रश्नको उत्तर कसले दिने?
नयाँ पुस्तालाई ‘कम्युनिस्ट के हो?’ भनेर सोध्ने हो भने कसैले मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन र माओको फोटो देखाउने छैन, ओली–विद्या, ओली–प्रचण्ड, प्रचण्ड–माधव, ओली–माधव सम्बन्धका कडी हेरेर फिस्स हाँस्नेछन्। यती, ओम्नी, वाइडबडी प्रकरण सम्झेर मुर्मुरिनेछन्।
वैचारिक तथा ऐतिहासिक अन्तर्यका दृष्टिकोणबाट पनि ‘कम्युनिस्ट’ शब्दको दम अब त्यति धेरै बाँकी छैन। सोभियत संघ, पूर्वी युरोप र पश्चिम बंगालमा जस्तै यो शब्दले अब कुनै सकारात्मक हैन, असफल विचार र बदनाम शासनको अर्थबोध गर्दछ। नयाँ पुस्तालाई ‘कम्युनिस्ट के हो?’ भनेर सोध्ने हो भने कसैले मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन र माओको फोटो देखाउने छैन, ओली–विद्या, ओली–प्रचण्ड, प्रचण्ड–माधव, ओली–माधव सम्बन्धका कडी हेरेर फिस्स हाँस्नेछन्। यती, ओम्नी, वाइडबडी प्रकरण सम्झेर मुर्मुरिनेछन्।
लेनिन, स्टालिन र माओजस्ता मिथ, बिम्ब, संकेत र प्रतीक सभ्य लोकतान्त्रिक समाजको अपेक्षासँग तालमेल राख्दैनन् भन्ने नयाँ पुस्तालाई राम्रो थाहा छ। प्रचण्डको पार्टीको नाम अझै ‘माओवादी’ छ। आफ्नो राष्ट्रिय भेलामा स्टालिन र माओको फोटो हटाएर मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन र रोजाको मात्र फोटो राखेका माधव–झलनाथ पक्षका लागि ‘माओवाद’ टोक्नु कि बोक्नु? सोभियत संघको पतनपछि ‘जनताको बहुदलीय जनवादी’ भनेकाका लागि ‘लेनिनवाद’ केके गर्ने? लेनिनवादको कुन प्रस्तावना नेपालका कम्युनिस्टले बोकेका छन्? सर्वहारा राज्य? सोभियत प्रणाली? एकदलीय शासन? उत्पादन साधनको राष्ट्रियकरण? उत्पीडित राष्ट्रियताहरुको स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार?
त्यही एउटा ‘जनवादी केन्द्रीयता’ थियो। त्यो पनि ओली–विद्या युगमा आएर समाप्त भयो। नेकपाभित्र फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ब्युँतेको एमालेभित्र वैधानिक कमिटीको बैठक बस्ने र अल्पमत, बहुमत गर्ने, बहुमतको निर्णय कार्यान्वयन र अल्पमतको सम्मान गर्ने आँट कसले गर्‍यो? कम्युनिस्टहरुका लागि लेनिनवादी जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त पनि आफू बहुमतमा पर्ने भए अभ्यास गरेजस्तो नाटक गर्ने अन्यथा बैठक छलेर भाग्ने दुई कौडीको सिद्धान्त न रहेछ। कहाँनेर कुन प्रस्तावनामा बाँकी छ लेनिनवाद? कसैले देखाइदिए हुने?
प्रदीप नेपालले सरकारी मुखपत्रमै ‘ओली स्टालिनवादी तानाशाह हुन्, उनलाई मार्क्सवादको कुनै ज्ञान छैन’ भनेर ठोकुवा गरिदिए। त्यो स्तरको सहकर्मीले यो स्तरको अभिव्यक्ति दिँदा के त्यो चुपचुपमै सकिने कुरा हुन्छ?
जहाँसम्म साम्यवाद र मार्क्सवादको सम्बन्ध हो, त्यो अर्को बृहत् बहसका विषय हुन सक्छन्। ‘समाजवाद’ र ‘साम्यवाद’ एउटै वैचारिक धारा हो भन्ने स्कुलिङले सबैभन्दा बढी कसैलाई घाटा भएको छ भने स्वयं कम्युनिस्टहरुलाई नै भएको छ। सत्य बुझ्ने एक महान् अवसरबाट उनीहरु विमुख भएका छन्। राजनीतिक विचारधाराका रुपमा ‘समाजवाद’ शब्दको प्रयोग सन् १८२८ तिरै रवर्ट ओवेनवादी समाजले गर्न थालिसकेको थियो। त्यसको २० वर्षपछि ‘कम्युनिस्ट’ शब्दको सन् १८४८ मा मार्क्स र एंगेल्सले ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ मार्फत सैद्धान्तीकरण गरेका हुन्।
कमरेडहरुलाई यो थाहा नभएको हैन कि स्वयं लेनिनको पार्टीको नाम ‘रुसी सामाजिक जनवादी मजदुर पार्टी’ थियो। सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिपछि मात्र उनले पार्टीको नाम फेरर ‘कम्युनिस्ट’ पार्टी बनाएका हुन्। यस सन्दर्भमा रोजा र लेनिनको विवाद के थियो? रोजा र काउत्स्कीको शास्त्रार्थ के थियो? लेनिनले किन ‘कोमिन्र्टन’ बनाए? पछि स्टालिनले किन त्यसलाई भंग गरे? युरोकम्युनिज्मको धार किन जन्मियो? बर्लिनको पर्खाल ढल्दा पूर्वका मानिस किन पश्चिम आए? पश्चिमका पूर्व जान किन इच्छुक भएनन्? यी प्रश्नको उत्तर ओलीज्मले दिन्छ?
नेपालका कम्युनिस्टहरु आज इतिहासको कठघरामा छन्। कठघरामा उभिएपछि आरोपको उत्तर दिनुपर्छ। उत्तर दिन नसके दण्डित हुन राजी हुनुपर्छ। प्रदीप नेपालले सरकारी मुखपत्रमै ‘ओली स्टालिनवादी तानाशाह हुन्, उनलाई मार्क्सवादको कुनै ज्ञान छैन’ भनेर ठोकुवा गरिदिए। त्यो स्तरको सहकर्मीले यो स्तरको अभिव्यक्ति दिँदा के त्यो चुपचुपमै सकिने कुरा हुन्छ? आखिर कम्युनिस्टहरुले पनि रिस उठ्दा गाली गर्ने शब्द त त्यही ‘स्टालिन, स्टालिनवाद र तानाशाही’ नै रहेछ। फेरि तथाकथित ‘पाँच प्राधिकार’ को फोटोमुनि मुठी बटारेर गरिने कम्युनिस्ट एकताले इतिहासको गति र अपेक्षासँग खै कहाँनेर तादाम्य राख्छ?
मार्क्सवाद के थियो? के थिएन? नेकपा के थियो? के थिएन? त्यसको इमानदार र वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्ने साहस भएको कुनै कमरेड यो आन्दोलनले किन कहिल्यै जन्माएन? भन्नका लागि त ‘ओली लोकतन्त्रका लागि १४ वर्ष जेल बसेका थिए’ भन्दिँदा पनि हुन्छ। यथार्थमा त ओली नक्सलवादी विद्रोहमा सामेल भएबापत जेल बसेका थिए। नक्सलवादबाट प्रभावित झापा विद्रोहले के अहिलेकै जस्तो लोकतन्त्रलाई आदर्श राज्य मान्थ्यो? निःसन्देह मान्दैनथ्यो।
सत्य बोल्ने आँट गर्ने हो भने ‘नक्सलवाद’ र ‘संसदीय लोकतन्त्र’ बीच कुनै सम्बन्ध थिएन/छैन। कहाँ दीर्घकालीन जनयुद्ध, नयाँ जनवादी गणतन्त्र र संयुक्त जनवादी अधिनायकत्वमा विश्वास गर्ने नक्सलवाद, कहाँ बेलायतको गौरवमय क्रान्तिले उदित गरेको संसदीय लोकतन्त्र। यी दुईबीच गोरु बेचेको साइनो पनि छैन।
मार्क्स व्यक्ति हुन्। उनको मनमा समयअनुसार विचारहरु तलमाथि भए होला। तर, ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ र ‘पुँजी’ मा व्यक्त विचारलाई वृद्ध मार्क्सले बुढ्यौलीमा छोरी–ज्वाइँलाई अनौपचारिक तबरमा भनेको आधारमा अवैध मान्दिने हो भने मार्क्सवाद नामको कुनै सिद्धान्त नै बाँकी रहँदैन।
सन् १८५१ मा कार्ल मार्क्सले जे वेमेडियरलाई लेखेको चिठी साक्षी छ। त्यो कुनै पुँजीवादी स्रोत वा गुगलबाट हैन, सोभियत शासनकालमा छापिएको ‘मार्क्स–एंगेल्सको संकलित पत्र व्यवहार’ मा पढ्न पाइन्छ। त्यसलाई पनि विश्वास नगर्ने हो भने भिन्नै कुरा। अन्यथा ‘समाजवाद’ र ‘साम्यवाद’ बीच के भिन्नता छ? किन मार्क्स र एंगेल्सले ‘समाजवाद’ को साटो ‘साम्यवाद’ शब्द प्रयोग गरे? यी सन्दर्भको सामना गर्न डराएर कहिल्यै सही बाटो पक्रिन सकिन्न।
नेकपाको गठन शीतयुद्धकालमा भयो। अक्टोबर क्रान्तिको पहिलो लहरमा हैन, चिनियाँ क्रान्तिको दोसो लहरमा भयो। त्यो नयाँ जनवादी क्रान्तिको अवधारणामा बनेको पार्टी थियो। पुष्पलालले जीवनभरि त्यही भनेर मरे। सन् १९९० ताकाको ‘तेस्रो लहर’ जो पहिलो लहरको विपरीत थियो, बाट प्रभावित मदन भण्डारीले ‘जबज’ त ल्याए, तर, वैचरिक विकासक्रममा झनै गन्जागोल बढाइदिए। जुन बेलायती संसदीय लोकतन्त्रको विकल्पमा भनेर साम्यवादको सिद्धान्त जन्मिएको थियो, भण्डारीले त्यो दुवै एकै हो, मार्क्सवाद, साम्यवाद र संसदीय लोकतन्त्रसँगै जान सक्छन् भन्ने भ्रम छरिदिए।
वेमेडियरलाई लेखेको चिठीमा कार्ल मार्क्सको प्रस्ट विश्वास थियो– अन्य समाजवादी विचारभन्दा साम्यवाद तीन कारणले फरक हुन्छ। एक– यसले वर्ग–संघर्षको ऐतिहासिकता अपरिहार्य सर्वहारा क्रान्तिमा पुग्छ र सर्वहारा अधिनायकत्व स्थापित गर्छ भन्ने विश्वास गर्दछ। दुई– सर्वहारा अधिनायकत्व वर्गविहीन समाज स्थापनाका लागि एक ऐतिहासिक संक्रमण हुनेछ। तीन– साम्यवादको उद्देश्य वर्गविहीन, राज्यविहीन र निजी सम्पत्तिविहीन समाजको स्थापना गर्नु हो।
यो प्रस्तावनालाई अस्वीकार गर्नु स्वयं मार्क्सलाई अपमान गर्नु हो। भलै, कि जीवनको उत्तरार्धमा मार्क्सले व्यक्तिगत रुपमा यो विश्वास गुमाइसकेका थिए। उनले कान्छी छोरी इलिनियोर र ज्वाइँ एडवर्ड एभेलिङलाई बेलायतकोे श्रमिक आन्दोलनमा सहयोग गर्न र ‘लेबर पार्टी’ जस्तो संसदीय लोकतन्त्र स्वीकार गर्ने पार्टी बनाउन मद्दत गर्न सुझाएका थिए। तर, मार्क्स भन्नु र मार्क्सवाद भन्नु एउटै हैन। मार्क्स व्यक्ति हुन्। उनको मनमा समयअनुसार विचारहरु तलमाथि भए होला। तर, ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ र ‘पुँजी’ मा व्यक्त विचारलाई वृद्ध मार्क्सले बुढ्यौलीमा छोरी–ज्वाइँलाई अनौपचारिक तबरमा भनेको आधारमा अवैध मान्दिने हो भने मार्क्सवाद नामको कुनै सिद्धान्त नै बाँकी रहँदैन।
मार्क्सले भनेजस्तो सर्वहारा अधिनायकत्व, संक्रमणकालका रुपमा कम्युनिस्ट पार्टीको लामो एकदलीय शासन, वर्गविहीन, राज्यविहीन र निजी सम्पत्तिविहीन समाज हाम्रो आजको आवश्यकता वा सम्भावना हो? बिल्कुलै हैन। त्यसो भए हामीलाई ‘कम्युनिस्ट पार्टी’ किन चाहियो? सबैलाई राम्ररी थाहा छ कि कुनै पनि पार्टीले ‘क्षमताअनुसारको काम र आवश्यकताअनुसारका दाम’ दिने समाज बनाउन सक्दैन, त्यो एक मिठो परिकल्पना मात्र हो, फेरि कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा जनतालाई किन भ्रममा राख्ने? गर्ने ओली–विद्या गुटको जस्तो चुत्थो शासन, जप्ने साम्यवादजस्तो ‘पवित्र’ शब्द।
आजको आवश्यकता कम्युनिस्ट एकता हुँदै हैन। त्यो देश र जनताका लागि अर्को धोका, भ्रम र बोझ हो। आजको आवश्यकता ‘नयाँ समाजवादी केन्द्र’ हो।
साम्यवाद एक बलियो तर्कशास्त्र हो तर सत्य हैन। ‘लजिक’ र ‘ट्रुथ’ बीच आकाशजमिनको भिन्नता हुन्छ। बलियो लजिक सत्य हो कि जस्तो लाग्छ, तर त्यो सत्य नहुन सक्छ। यदि सत्य हो भने व्यवहारबाट पुष्टि हुनुपर्छ। सोभियत संघमा स्टालिनले सन् १९२८ मा समाजवादी चरण पूरा भई साम्यवाद प्रारम्भ भएको घोषणा गरेका थिए। तर, त्यो स्टालिनले घोषणा गरेको ६३ वर्षपछि पनि साम्यवादी समाज बनेन बरु उल्टै स्वाहा भयो। न राज्यविहीनता न वर्गविहीनता न निजी सम्पत्तिविहीनता।
चीनको हालत ठीक त्यही छ। त्यहाँ अर्को ७४ वर्ष बितेको छ तर सर्वहारा अधिनायकत्वको संक्रमणकाल पूरा हुने, राज्यविहीन, वर्गविहीन, निजी सम्पत्तिविहीन समाज बन्ने कुनै छेकछन्द छैन। वर्गविहीन समाज बन्ने सपनामा बोकेर हिँडेको राज्यमा ५०० बढी खर्बपति जन्मिएका छन् र धनी–गरिबबीचको खाडल पुँजीवादी भनिएको अमेरिकाको भन्दा धेरै भएको छ। उत्तर कोरियाको स्थिति झनै बेहाल छ। कुन विश्वास र व्यावहारिक सम्पुष्टिका आधारमा हामीलाई कम्युनिस्ट पार्टी चाहिएको हो? कम्युनिस्ट एकता चाहिएको हो? केवल ब्रान्ड निष्ठा र चुनाव जित्न सजिलो होस् भन्नका लागि? राजनीतिक करिअरका लागि? सत्तामा पुगेर सोभियत संघमा र युगोस्लाभियामा जस्तै ‘न्युमेन क्लातुरा’ जन्माउन र देशको अस्तित्व नै संकटमा पार्नका लागि?
खसोखास कुरा गर्ने हो भने– आजको आवश्यकता कम्युनिस्ट एकता हुँदै हैन। त्यो देश र जनताका लागि अर्को धोका, भ्रम र बोझ हो। आजको आवश्यकता ‘नयाँ समाजवादी केन्द्र’ हो। कार्ल मार्क्सकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने जसरी ‘क्षमताअनुसारको काम, आवश्यकताअनुसारको दाम’ सम्भव छैन, त्यसै गरी ‘क्षमताअनुसारको काम, कामअनुुसारको दाम’ सम्भव छ। मानिसलाई ‘सर्वव्यापी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा’ बाट क्षमतावान् बनाउन सम्भव छ। सोहीअनुसारको रोजगारी सिर्जना गर्न र समतामूलक समाज बनाउँन सम्भव छ।
जे आज आवश्यक र सम्भव छ, त्यो नै आजको सही कार्यदिशा हो। मानौं कि हजार वर्षपछि साम्यवाद आउला, त्यो न आजको आवश्यकता हो, न सम्भावना। तर, ‘समाजवाद’ पनि कम भ्रामक विचारचाहिँ हैन। यसलाई एउटै अर्थ र परिभाषामा बुझ्न बुझाउन सम्भव छैन। समाजवादका यति धेरै शाखाउपशाखा छन् कि ती आफैंमा बेमेलपूर्ण प्रतीत हुन्छन्। तर, समाजवादका केही स्थिर मानक पनि छन्, जसलाई नेपालको सन्दर्भमा नयाँ ढंगले पुनः भाष्यकरण गर्न सकिन्छ।